यता मन्त्री नबनाए उता जान्छु भन्दै धम्क्याउन थाले ! -
यता मन्त्री नबनाए उता जान्छु भन्दै धम्क्याउन थाले !
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त दुई मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आकांक्षीको हानथाप छ । कतिपयले मन्त्री नपाए ओली समूहमा जान्छु भन्दै धम्क्याउन थालेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
उनीहरु दुवै ओली निकट मन्त्री थिए । पठानसिंह र झपट दुवै सरकारबाट हटेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ओली समूहको उपस्थिति शून्य छ ।उनीहरू दुवै जिम्मेवारीबाट हटेपछि अहिले प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका नेताहरु मन्त्री बन्ने लबिइङमा छन् । दुई मन्त्रालयका लागि झन्डै आधा दर्जन बढी सांसद आकांक्षी छन् ।
अहिले दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी, नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी, वीरमान चौधरीलगायत मन्त्रीको आकांक्षी रहेको स्रोतले बतायो ।
अछामबाट निर्वाचित अर्थमन्त्री बोहराले राजीनामा दिएपछि नेकपाका सचेतक अक्कल रावललाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै उनी निकटकाले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
एकातिर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पक्षमा सांसद जोगाउने सकस छ भने अर्कातिर मन्त्रीका आकांक्षीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।
५३ जनाको प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना राजपाका छन् । नेकपाका ३९ जनामध्ये ओली पक्षमा ८ जना मात्रै खुलेका छन् । सभामुख र उपसभामुख बाहेक प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा २८ जना रहेको सो समूहको दाबी छ । तर, मन्त्री पद नपाएपछि केही सांसदहरूले साथ छोड्ने खतरा छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री भट्टले छलफल चलाइरहेका छन् ।
कसलाई जिम्मेवारी दिने र कहिले दिने भन्ने विषयमा उनी अहिले पार्टी नेतृत्वसँग छलफलमा छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू अहिले पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल गरिरहनु भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले भने, ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीज्यूको योजना छ ।’
आइटीको जागिर छोडेर सुरु गरेको ‘मेट्रो तरकारी’
कोरोना खोप किन्न पत्रिकामा सूचना निकालेर सरकारले माग्यो पैसा
पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नगरेको भए नेपाल होइन, उहिले भारतको प्रान्त बनिसक्थ्योः लिङदेन